Matambiro chaiwo enharaunda yeCaribbean: Kubva kusalsa kuenda kubachata | Kufamba Nhau
Dzakajairika kutamba kwedunhu reCaribbean
Luis Martinez | | America, tsika nemagariro
Matambiro akajairika enharaunda yeCaribbean ane midzi yawo munguva yakapfuura. Tinodaidza iyi nzvimbo yakakura inosanganisira nyika dzinoverengeka dzakashambidzwa neicho chaicho Gungwa reCaribbean uye zvakare zviwi zvakakomberedzwa nechikamu chino cheAtlantic Ocean. Pakati pekutanga pane Mekisiko, Korombiya, Nikaraguwa o Panama, nepo tichitaura nezvekupedzisira, tinogona kutaura nyika se Kiyuba (kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvetsika dzenyika ino, tinya apa), Dominican Republic o Jamaika.
Naizvozvo, iwo matambiro akajairika enharaunda yeCaribbean ndeaya anoitwa mudunhu iri rakakura. Parizvino, iwo mhedzisiro yekubatanidzwa kwezvinhu zvitatu zvinokanganisa: chizvarwa, chiSpanish neAfrica, yekupedzisira yakaunzwa imomo neavo vaive nehuranda senzvimbo yavaienda. Muchokwadi, mazhinji eaya matambiro akaitwa pakupera kwemazuva ekushanda zvakaoma evaranda nevashandi vemahara. Asi, pasina kumwe kunonoka, isu tichaenda kukuudza iwe nezve idzi mutinhimira.
1 Matambiro chaiwo enharaunda yeCaribbean: yakakura zvakasiyana
1.1 Salsa, yeCaribbean yekutamba par kugona
1.2 Merengue, Dominican mupiro
1.3 Iyo mambo neayo mavambo eAfrica
1.4 Cha cha cha
1.5 Cumbia, African nhaka
1.7 Mimwe mitambo yemunharaunda isinganyanyozivikanwa yeCaribbean
Matambiro chaiwo enharaunda yeCaribbean: yakakura zvakasiyana
Chinhu chekutanga chinomira pamitambo iyi ndeche nhamba huru yeavo varipo. Semuenzaniso, iyo inonzi vakapfeka zvitema, anobva kuchitsuwa cheSanta Lucia; iyo puja Colombian, iyo sextet kana ivo vari palenquero kana iyo dhiramu shoma, akaberekerwa muPanama. Asi, zvichipiwa kusakwanisika kwekumira pane ese aya matambiro, isu tave kuzokuudza iwe nezve anozivikanwa kupfuura ese.
Salsa, yeCaribbean yekutamba par kugona
Salsa, iwo chaiwo mutambo wedunhu reCaribbean par kugona
Sezvineiwo, iyo yakajairika dhanzi yeCaribbean yakave inozivikanwa mu New York kubva pamakumi matanhatu ezana ramakore rapfuura. Ndipo panguva iyoyo vaimbi vePuerto Rican vaitungamirwa neDominican Johnny pacheco akaita kuti ave nomukurumbira.
Zvisinei, mavambo ayo anodzokera kunyika dzeCaribbean uye kunyanya ku Kiyuba. Muchokwadi, zvese mutinhimira uye mutinhimira wazvo zvakavakirwa pamimhanzi yechinyakare kubva munyika iyoyo. Kunyanya, iyo mutinhimira maitiro unouya kubva ivo cuban uye mutinhimira wakatorwa kubva ivo montuno.
Zvakare Cuba ndezvimwe zvezviridzwa zvake. Semuyenzaniso, iyo bongo, iyo pailas, iyo güiro kana iyo cowbell izvo zvinozadziswa nevamwe zvakaita sepiyano, hwamanda uye mabass maviri. Chekupedzisira, kuwirirana kwaro kunobva mumimhanzi yekuEurope.
Merengue, Dominican mupiro
Merengue ndiyo yekutamba inonyanya kufarirwa mu Dominican Republic. Yakauyawo kune United States zana ramakore rapfuura, asi kwayakatangira ndeyegumi nemapfumbamwe uye haina kujeka. Zvikuru zvekuti kune ngano dzinoverengeka nezvazvo.
Mumwe wevanonyanya kuzivikanwa anoti gamba rekuzvarwa rakakuvadzwa mugumbo richirwa neSpanish. Paakadzokera kumusha kwake, vavakidzani vake vakasarudza kumuitira mutambo. Uye sezvo ivo vakaona kuti aikamhina, vakasarudza kumutevedzera pakutamba. Mhedzisiro yacho ndeyekuti ivo vakadhonza makumbo avo uye vakafambisa chiuno, zviviri zvakajairika maficha e meringue choreography.
Kunyangwe chiri chokwadi kana chisiri chokwadi, inyaya yakanaka. Asi chokwadi ndechekuti kutamba uku kwave kuita kweanonyanya kufarirwa pasirese, kusvika padanho rekuti rakaziviswa Isingaonekwe Tsika Nhoroondo yeVanhu neUNESCO.
Zvichida zvakanyanya kuita ndeye tsika iyo inoti yakabva kune varombo venharaunda ye Iyo Cibao kuti vaizotengesa zvigadzirwa zvavo kumaguta. Ivo vakagara munzvimbo dzekugara uye mumwe wavo ainzi Perico Ripao. Ndipo pavakazvivaraidza nekuita kutamba uku. Saka yakadaidzwa panguva iyoyo nenzvimbo chaizvo Perico Ripao.
Kana zviri zvemumhanzi wake, zvinoenderana nezviridzwa zvitatu: akodhiyoni, güira netambora. Chekupedzisira, zvakare zvinoda kuziva kuti munhu mukuru aiona nezvekuvandudza nekusimudzira meringue aive mudzvanyiriri Rafael Leonidas Trujillo, vese vanofarira izvi ndevaya vakagadzira zvikoro nemaorchestra kuzvisimudzira.
Iyo mambo neayo mavambo eAfrica
Pakati pemitambo yakajairika yedunhu reCaribbean, izvi zvakagadziriswa mukati Kiyuba. Nekudaro, kwayakatangira kunonzi kune varanda vemuAfrica vakasvika pachitsuwa ichi. Chero zvazvingaitika, vhezheni yazvino yedhanzi iyi inokonzerwa ne Arcaño orchestra mumakore makumi matatu ezana ramakore rapfuura.
Kutora iyo Cuban danzón, akaimhanyisa uye akaunza syncopation kumheremhere apo achiwedzera zvinhu zvemhando iyi montuno. Nekudaro, ingave iri yekuMexico Damaso Pérez Prado ndiani angakurudzira mambo kutenderera pasirese. Akaita izvi nekuwedzera huwandu hwevatambi muorchestra uye achiwedzera akajairika maNorth American jazz zvinhu zvakaita sehwamanda, saxophones, uye mabass maviri.
Hunhu hwakagadzirawo hunoshamisa counterpoint izvo zvakaita kuti muviri ufambe pakurova. Nechekare mumakumi mashanu ezana ramakumi maviri, vaimbi vanoverengeka vakatamisira mambo New York zvichiita kuti ive yechokwadi chenyika.
Zvakare akazvarwa mu KiyubaKwayakabva ndiko chaizvo kunowanikwa mune mambo maitiro. Paive nevatambi vaive vasina kugadzikana neiyo frenetic mutinhimira wekutamba nhepfenyuro naPérez Prado. Saka vakatsvaga chimwe chinhu chakadzikama uye saka chakazvarwa mune cha-cha ine yayo yakanyarara tempo uye inonakidza mimhanzi.
Kunyanya, kugadzirwa kwayo kunonzi kune kune mukurumbira wevhayorini uye munyori Enrique Jorrín, iyo yaisimudzirawo kukosha kwemazwi enziyo akaimbwa nevaimbi vese kana nevaimbi vega.
Maererano nenyanzvi, uyu mumhanzi unobatanidza midzi ye Cuban danzón uye zvake mambo, asi inoshandura kubata kwayo kwakanaka uye zvine mutsindo. Uye zvakare, inosvitsa zvinhu zveiyo schottische kubva kuMadrid. Kana zviri zvekutamba pachezvazvo, zvinonzi zvakagadzirwa neboka rakazvinyora mukirabhu yeSilver Star muHavana. Tsoka dzake dzaiita ruzha pasi rakaita kunge matatu akateedzana. Uye vachishandisa onomatopoeia, ivo vakabhabhatidza iyo genre se "Cha Cha Cha".
Cumbia, African nhaka
Kusiyana neiyo yapfuura, iyo cumbia inoonekwa seye mugari wenhaka kune iyo maAfrican madhanzi vakatora kuenda kuAmerica avo vaitakurwa sevaranda. Nekudaro, zvakare ine zvemuno neSpanish zvinhu.
Kunyangwe nhasi ichitamba pasi rese uye paine hurukuro yeArgentina, Chilean, Mexico uye nyangwe Costa Rican cumbia, mavambo ekutamba uku anofanirwa kuwanikwa mumatunhu e Colombia nePanama.
Nekuda kwekubatanidzwa kwataive tichitaura nezvazvo, madhiramu anobva kunzvimbo yavo yeAfrica, nepo zvimwe zviridzwa zvakaita se iyo maracas, iyo pitos uye gouache Ivo ndeve chizvarwa kuAmerica. Pane kudaro, zvipfeko zvinopfekwa nevatambi zvinobva kune yekare Spanish mhando yewadhirobe.
Asi chinotinakidza zvikuru muchinyorwa chino, chinova kutamba kwakadaro, ine midzi yechokwadi yeAfrica. Inopa hunhu uye chairo choreography yematambiro ayo anogona kuwanikwa nhasi mumoyo we Africa.
Ichowo kutamba kwechokwadi Dominican asi yakawedzerwa pasirese. Yakatanga mumakumi matanhatu emakore ezana ramakumi maviri kubva muna rhythmic bolero, kunyange ichipawo pesvedzero kubva merengue and the ivo cuban.
Uye zvakare, kune bachata zvimwe zvakajairwa zviridzwa zveavo mutinhimira zvakatsiviwa. Semuenzaniso, ma maracas e bolero akatsiviwa ne güira, zvakare yemhuri yekurova, uye vakaunzwa zvXNUMX.
Sezvazvakaitika nemimwe mitambo yakawanda kwazvo, bachata raionekwa mukutanga kwaro sekutamba kwemakirasi akazvininipisa. Ipapo yaizivikanwa se "Mumhanzi unorwadza", iyo yaitaura nezve kushushikana kwakaratidzirwa mumadingindira avo. Yakanga yatove mumakumi makumi masere ezana ramakumi maviri emakore apo rudzi rwacho rwakapararira pasi rese kudzamara rwakamisikidzwa neUNESCO se Isingaonekwe Nhoroondo Yevanhu.
Kune rimwe divi, munhoroondo yayo yese, bachata rakakamurwa kuita maviri maseru. Iyo nacnoamargue aiva mumwe wavo. Yakabatanidza hunhu hwekutamba uku pamwe nemumhanzi wakagadzirwa kubva kuzviridzwa zvemagetsi uchinge uchibatana nemamwe marudzi akadai jazi kana dombo. Muiti wake wepamoyo aive Sonia Silvestre.
Wechipiri subgenre ndiwo anonzi pink bachata, iyo yakawana mukurumbira wakawanda pasirese. Izvo zvakakwana kuti isu tikutaurire iwe kuti ayo makuru manhamba ari Victor Victor uye pamusoro pezvose, Juan Luis Guerra kuitira kuti iwe uzvione. Mune ino kesi, inosanganiswa ne kudanana ballad.
Kana zviri zvemhando iyi parizvino, chakanyanya kuburitsa muimbi weAmerica wekuDominican mavambo Romeo Santos, kutanga neboka rako, Aventura, uye ikozvino solo.
Mimwe mitambo yemunharaunda isinganyanyozivikanwa yeCaribbean
Matambiro atakakuudza kusvika pari zvino akafanana neCaribbean, asi vakapfuura nharaunda yavo kuti vave nemukurumbira pasi rese. Nekudaro, kune mimwe mitambo isina kunge yakabudirira kunze kwenyika, asi inozivikanwa kwazvo munzvimbo yeCaribbean.
Ndiyo nyaya ye mubatanidzwa, vane mavambo ari munharaunda ye Korombiya vasati vauya veSpanish. Iyo inosanganisa zvinokwezva kubva kune vekuzvarwa mapaipi ne African mutinhimira uye ine yakajeka inonyengedza chinhu. Parizvino idhanzi rebhora iro rine mutserendende unotetepa uye wengoma. Kuitamba, vanowanzo tora zvipfeko zveColombia. Zvakare ndezverudzi urwu rwekutamba iyo Fandango, iyo isina chekuita nemazita ayo echiSpanish. Pakutanga kubva kuguta reBolivia re Sucre, nekukurumidza kupararira ku Colombian Urabá. Iyo inofadza corrido umo, zvinoshamisa, ivo vakadzi vanotakura makenduru kuti varambe kutamba kwevanhurume.
Midzi yakajeka yeAfrica ine mapalé. Mukutamba uku, ndiwo madhiramu neanofona anoisa mutinhimira. Kwayakatangira yaive nechokuita nebasa, asi nhasi ine tambo isingarambike yemhemberero. Iyo ine simba uye ine hupenyu kutamba, izere neexoticism.
Pakupedzisira, isu tichakuudza nezve bullerengue. Kunge mimwe mitambo yemudunhu reCaribbean, inosanganisira kutamba, rwiyo uye dudziro yenziyo. Iyo yekupedzisira inoitwa chete nengoma uye nemaoko emawoko. Kune chikamu chayo, rwiyo rwacho runogara ruchiitwa nevakadzi uye kutamba kunogona kuitiswa vese vaviri vakaroora uye mapoka.
Mukupedzisa, isu takakuudza nezve mamwe emadhanzi anozivikanwa muCaribbean. Iwo ekutanga isu ataura kwauri awana mukurumbira wepasi rese uye mukurumbira. Kune avo chikamu, chekupedzisira vanozivikanwa zvakaenzana mudunhu mavanenge vachiitirwa, asi zvishoma pasi rese. Chero zvazvingaitika, kune vamwe vakawanda akajairika matambiro enharaunda yeCaribbean. Pakati pavo, isu tichataura mukupasa iyo farotas, the nyora, yakaunzwa kuAmerica neSpanish, kana iyo Ndichave ndinoziva-ndinoziva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » tsika nemagariro » Dzakajairika kutamba kwedunhu reCaribbean
Maguta akanakisa eSpanish ekushanyira nemotokari muchirimo